सेप्टेम्बरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
जापान भ्रमण गर्न उत्तम समय
सिम कार्ड बनाम पकेट वाइफाइ
सम्राट र झण्डा
मौसम र मौसम
भूकम्प र ज्वालामुखीहरु
जापान सम्बन्धित साइटहरू
जीवन र संस्कृति
प्रकृति संग सद्भाव
प्रकृतिले हामीलाई "मुजो" सिकाउँछ
जापानमा जाडो पहिरन
होक्काइडोमा जाडो पहिरन
जापानमा वसन्त earतु
जापानमा ग्रीष्म earतु
जापानमा शरद earतु
मान्छे संग सद्भाव
शिष्टाचार र सीमा शुल्क
जापानी टीम खेल
फोटोहरू: जापानी विवाह
फोटो: बाँस संस्कृति
फोटोहरू: जापानमा प्रकाश डिजाइन
फोटोहरू: केई कारहरू
टिकट र यात्रा
जनावर र माछा
मन्दिर र तीर्थहरू
समुराई र निन्जा
मंगा र एनिमे
सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रमहरू
फोटोहरू: इनल्यान्ड सागर
होटल र र्योकन
शिन्कानसेन (बुलेट ट्रेन)
नयाँ Chitose एयरपोर्ट
आश्चर्यजनक asonsतुहरू, जीवन र संस्कृति
सप्पोरो, जापानमा Panoramic फूल उद्यान Shikisai-no-oka = शटरस्टक
जापानी जीवन र संस्कृति! प्रकृति र मानिससँग मिलेर बस्नुहोस् >
प्रकृति संग सद्भाव! जापानको परिवर्तित inतुहरुमा जीवन >
जापानी शरद enjoyतुको मजा कसरी लिने! यो यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो मौसम हो! >
जापानमा सेप्टेम्बर: टाइफुनबाट सावधान! शरद graduallyतु बिस्तारै आउँछ >
सेप्टेम्बरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। सेप्टेम्बर ग्रीष्म देखि शरद transitionतु मा संक्रमणको समय हो। त्यसोभए, होक्काइडोमा, यो दिनको समयमा पनि राम्रो देखिन्छ। मौसम अलि अस्थिर छ र वर्षाका दिनहरू बढ्छन्। तर उही समयमा, पर्यटक संख्या अगस्तको तुलनामा पर्याप्त कम गरिएको छ। तपाईं फुर्सतको यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईलाई अधिक जान्न को लागी महीना को लागी स्लाइडर को उपयोग गर्नुहोस्।
जनवरी मा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म जनवरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। यदि तपाईं जनवरीमा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया कोटको रूपमा पर्याप्त शीतकालीन सुरक्षा नबिर्सनुहोस्। होक्काइडोको पश्चिम तर्फ जापानको सागरबाट आउने बादलहरू हिउँ पर्नेछ र यति धेरै हिउँ टाढा पर्थ्यो। होक्काइडोको पूर्वपट्टि, हिउँ पछाडि पश्चिम तिर झर्दैन। यद्यपि तापमान कहिलेकाँही फ्रिजिंग बिन्दु १० डिग्री तल झर्छ। कृपया सावधान रहनुहोस्। यो लेखले तपाईंलाई चित्रणको मद्दत गर्न धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ जनवरीमा होक्काइडोको मौसम कल्पना गर्न, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जनवरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे केही लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। जनवरीको होक्काइडोको जनवरीमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका: जनवरीमा होक्काइडो मौसम जनवरीको मध्यमा होक्काइडो मौसम जनवरीको अन्तमा होक्काइडो मौसम जनवरीमा होक्काइडोको बारेमा सिफारिस गरिएका भिडियो प्रश्न र उत्तर होक्काइदोमा जनवरीमा हिउँ पर्ने गर्छ? यो जनवरी मा Hokkaido भर घाम लाग्छ। विशेष गरी मध्य जनवरी देखि, त्यहाँ धेरै हिउँ छ। जापानको सागरबाट ओसिलो बादलले होक्काइडो पहाडहरूमा हिर्काउँदछ र हिउँ निम्त्याउँछ। यो अक्सर Niseko, ओटारु र जापानको सागर नजिकै सप्पोरोमा सुख्खा हुन्छ। अर्को तर्फ, प्रशान्त क्षेत्रमा पूर्वी होक्काइडोमा, यो धेरै चिसो छ, तर ...
फेब्रुअरीमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
फेब्रुअरीमा, जाडो उत्सवहरू सप्पोरो हिउँ उत्सव सहित, होक्काइडोमा आयोजना गरिन्छ। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै मानिसहरू यस समय होक्काइडो जाँदैछन्। तर फेब्रुअरीमा होक्काइडो एकदम चिसो छ। यदि तपाईं फेब्रुअरीमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया जाडोबाट पर्याप्त सुरक्षा नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा म फेब्रुअरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा विवरणहरू प्रदान गर्दछु। यस लेखले होकाइडोको फेब्रुअरीको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। स्लाइड मार्फत र महिना को लागी तपाइँ अधिक जान्न को लागी चयन गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। फेब्रुअरीमा होक्काइडोको फेब्रुअरीमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका (फेब्रुअरी) होक्काइडो फेब्रुअरीको शुरुमा मौसम यो फेब्रुअरी मा होक्काइडो मा धेरै राम्रो स्नोड। त्यहाँ धेरै हिउँको थुप्रो हुन सक्छ। फेब्रुअरीमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? फेब्रुअरी जनवरी संगै धेरै चिसो समय हो। विशेष गरी फेब्रुअरीको पहिलो आधा मा, दिनको अधिकतम तापमान लगभग जमिन भन्दा कम छ। होक्काइडोमा हामीले फेब्रुअरीमा कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ? फेब्रुअरीमा, होक्काइडोमा तपाईंलाई पूर्ण शीतकालीन लुगा चाहिन्छ। होक्काइडोमा जाडोका लुगाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जब ...
मार्चमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
जापानी द्वीपसमूह हरेक मार्चमा जाडोदेखि वसन्तसम्मको संक्रमण अवधिमा प्रवेश गर्दछ। मौसम अस्थिर छ र हावा वर्षको यस समयमा बलियो छ। होक्काइडोमा पनि तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ वसन्त नजिकै आउँदैछ। जे होस्, होक्काइडोमा तपाईंले चिसो मौसम काउन्टरमा उपेक्षा गर्नुहुन्न। मार्चमा पनि हिउँ प्रायः होक्काइडोमा पर्छ। मार्चको अन्त सम्म, हिउँ भन्दा बढी वर्षा हुनेछ। जे होस्, निसेको जस्ता स्की रिसोर्टहरूमा तपाईं हिउँको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म मार्चमा होक्काइडो मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। यस लेखले धेरै तस्विरहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको मार्च मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मार्चमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। मार्च २०१ H मा होक्काइडोमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका मार्च (अवलोकन) होक्काइडो मार्चको शुरुमा मौसम होक्काइदो मौसम मार्चको मध्यमा होक्काइदो मौसम मार्चको अन्तिम प्रश्न क्वान्ड ए र मार्चमा होक्काइडोको बारेमा हिउँ पर्ने के होक्काइडोमा मार्चमा हिउँ पर्दछ? मार्चमा पनि होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ तर वसन्त बिस्तारै आउँदैछ। तपाईं निसेको, आदिमा जाडो खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तर शहरी क्षेत्रहरूमा यस समयमा अधिक न्यानो दिनहरूको साथ हिउँ पग्लिन थाल्नेछ। मार्चमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? मार्च मा होक्काइडो अझै छ ...
अप्रिलमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म होक्काइडोको अप्रिल महिनाको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। होक्काइडोमा, हिउँ अझै अप्रिलमा पनि पस्न सक्छ। यो दिनको समयमा धेरै तातो हुन्छ तर कहिले कत्ति धेरै चिसो हुन्छ, त्यसैले सावधानी रहनुहोस्। यस लेखले धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको अप्रिलमा मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अप्रिलमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर अप्रिलमा होक्काइडोको मौसम (अवलोकन) होक्काइडो अप्रिलको शुरुमा मौसम होक्काइदो मौसम अप्रिलको मध्यमा होक्काइदो मौसम अप्रिलको अन्तमा होक्काइदो मौसम क्यू र अप्रिलमा होक्काइडोको बारेमा हिमपात अप्रिलमा होक्काइडोमा पर्छ? अप्रिलको पहिलो आधामा असहिकावा र सप्पोरो जस्ता केही शहरहरूमा हिउँ पर्न सक्छ। यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा, तपाईंलाई सामान्यतया हिउँले ढाकिएको परिदृश्यहरू फेला पार्न गाह्रो हुनेछ। अर्कोतर्फ, हिउँ अझै पहाडहरूमा खस्दछ। तपाईं अझै निसेको र अन्य स्की रिसोर्टहरूमा जाडोका खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। अप्रिलमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोको तापमान बिस्तारै अप्रिलमा बढ्नेछ। मध्य अप्रिलमा, दिनको अधिकतम तापमान १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा, अप्रिलको अन्तमा वसन्तको रूपमा चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन् ...
होक्काइडो मेमा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म होइकाइडो मौसमलाई मइमा परिचय गर्ने छु। यस समयमा, पूर्ण-स्प्रि spring वसन्त होक्काइडोमा आउँदछ। चेरी फूलहरू टोकियो भन्दा एक महिना पछि खिलछन् र त्यसपछि रूखहरू एक अद्भुत ताजा हरियोमा परिणत हुन्छन्। तपाईं रमणीय मौसमको साथ सुन्दर पर्यटन क्षेत्रहरूको अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो लेखले होकाइडोको मे महिनाको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मे टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। विषयसूची तालिका मे र होक्काइडोको बारेमा मेको होक्इडोको मेमा (सिंहावलोकन) होक्काइडो मौसम मेको शुरुमा होक्काइदो मौसम मेको होक्किडो मौसमको मध्य मेमा होक्काइदो मौसम मे र होक्काइडोको बारेमा मेमा हो हिउँका मेमा हिमपात हुन्छ? मेमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। जे होस्, केहि ठुलो स्की रिसोर्ट्स जस्तो Niseko मा, तपाईं लगभग मे 6th सम्म स्की गर्न सक्नुहुन्छ। मेमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोको मेमामा वसन्त मौसम छ। तपाईं आराम सँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। होक्काइडोमा हामीले कस्तो प्रकारको लुगा लगाउनु पर्छ? वसन्त कपडा मे मा वांछनीय छन्। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाइँ जाडो हिउँ हिउँहरुबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिना हो। यदि ...
जूनमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाइँ जापान मा जून को लागी यात्रा गर्न को लागी योजना बनाउनु हुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले आफ्नो यात्रामा Hokkaido जोड्नुहोस्। जापान सामान्यतया जुनमा वर्षा र चिसो हुन्छ। यद्यपि होक्काइडोमा यति धेरै वर्षाका दिनहरू छैनन्। टोकियो र ओसाका जस्तो नभई, तपाई मौसमको हिसाबले रमाइलो समयको आनन्द लिनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म जून महिनामा होक्काइडोमा मौसमको बारेमा कुरा गर्ने छु। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। जूनको होक्काइडोको जूनमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका (अवलोकन) जूनको शुरुमा होक्काइडो मौसम जूनको मध्यमा होक्काइडो मौसम जूनको अन्त्यमा होक्काइदो मौसम Q र A जुन जूनमा होक्काइडोको बारेमा जूनमा हिमपात हुन्छ? जूनमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के फूलहरु जून मा होक्काइडो मा खिलिरहेका छन्? होक्काइडोको फुरानो र बिइमा जून महिनाको अन्तदेखि ल्याभेन्डर फूल्न थाल्छ। यसै महिनामा खस्का र ल्यूपिन पनि फूल्छन्। जूनमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? मौसम जुन जुन मा होक्काइडो मा वसन्त देखि गर्मी को लागी परिवर्तन हुन्छ। सामान्यतया, यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ सुन्दर हुन सक्छ। जूनमा होक्काइडोमा हामीले कस्ता लुगा लगाउनु पर्छ? वसन्त लुगा जूनमा होक्काइडो को आरामदायक यात्रा को लागी सिफारिस गरीन्छ। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। ...
जुलाई मा Hokkaido मौसम! तापमान, वर्षा र लुगाहरू
यस पृष्ठमा, म जुलाईमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। जुलाई अवलोकन गर्नका लागि उत्तम मौसम हो। हरेक जुलाईमा जापान र विदेशबाट धेरै पर्यटक होक्काइडो आउँछन्। होक्काइडोमा, यो दुर्लभ हुन्छ कि यो टोकियो वा ओसाका जत्तिकै तातो हुनेछ। बिहान र बेलुका तापमान ड्रप राहत दिनेछ, त्यसैले तपाईं वास्तवमै आरामदायी यात्राको आनन्द लिन सक्षम हुनुपर्दछ। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जुलाईमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। जुलाईमा होक्काइडोको बारेमा जुलाई H होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका जुलाईमा होक्काइडो मौसम जुलाईको मध्यमा होक्काइडो मौसम होक्काइदो मौसम जुलाईको अन्तमा होक्काइडो मौसम जुलाई र होक्काइडोको बारेमा जुलाई जुलाईमा हिमपात घट्छ? जुलाईमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के जुलाईहरु मा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्? ल्याभेन्डर जुलाई मा होक्काइडो मा आफ्नो चरम पुगेको छ। विशेष गरी जुलाई को बीच देखि फूल क्षेत्रहरु सुन्दर छन्। जुलाईमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? होक्काइडो जुलाई मा एक गर्मी पर्यटन मौसम हुनेछ। यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ चिसो छ। जुलाईमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? ग्रीष्मकालीन लुगा जुलाईमा ठीक हुनेछ। जे होस्, यो बिहान र साँझ होक्काइडोमा चिसो छ, त्यसैले कृपया ज्याकेट ल्याउनुहोस् वा ...
अगस्टमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
अगस्ट होक्काइडोमा भ्रमणका लागि उत्तम मौसम हो भनिन्छ। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मि toको कारण जापानमा आक्रमण गर्ने आँधी बढ्दै गएको छ र होक्काइडोमा पनि आँधीबेहरीको क्षति सजिलै देखिन सक्ने भएको छ जुन अहिलेसम्म आँधीको प्रभाव नभएको बताइएको छ। यद्यपि होक्काइडो मूल रूपमा अगस्तमा सहज छन्, कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमानको बारेमा सचेत रहनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा होक्काइडो मौसमको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। अगस्तमा मौसमको कल्पना गर्न सजिलो बनाउनको लागि, म तल अगस्टमा लिइएको फोटोहरू समावेश गर्दछु। कृपया जब तपाइँ तपाइँको यात्रा योजनाको योजना बनाउँनुहुन्छ सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अगस्तको होक्काइडोको अगस्तमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका (अवलोकन) होक्काइडो अगस्टको शुरुमा मौसम होक्काइडो मौसमको अगस्टमा होक्काइदो मौसम अगस्त अगस्तको उत्तरमा प्रश्नोत्तरी र अगस्तमा होक्काइडोको बारेमा हिउँ पछाडि होक्काइडोमा हिउँ पर्न सक्छ? अगस्तमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के फूलहरू अगस्तमा होक्काइडोमा फूलेका छन्? होक्काइडोमा, फूलका फूलहरूमा विभिन्न फूलहरू फूल्छन् र ती धेरै रंगीन हुन्छन्। अगस्तको सुरुवात सम्म ल्याभेन्डर खिल्यो। अगस्तमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? होक्काइडोमा पनि, यो अगस्तको दिनको समयमा तातो छ। तर बिहान र साँझ तुलनात्मक रूपमा सुन्दर छन्। हामीले कस्तो खालको कपडा ...
यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। सेप्टेम्बर ग्रीष्म देखि शरद transitionतु मा संक्रमणको समय हो। त्यसोभए, होक्काइडोमा, यो दिनको समयमा पनि राम्रो देखिन्छ। मौसम अलि अस्थिर छ र वर्षाका दिनहरू बढ्छन्। तर उही समयमा, पर्यटक संख्या अगस्तको तुलनामा पर्याप्त कम छ। तपाईं फुर्सतको यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल सेप्टेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको सेप्टेम्बरमा (अवलोकन) सेप्टेम्बरको शुरुमा होक्काइडो मौसम सेप्टेम्बरको मध्यमा होक्काइदो मौसम सेप्टेम्बरको अन्तमा होक्काइदो मौसम Q र A सितम्बरमा होक्काइडोको बारेमा सेप्टेम्बरमा हिउँ पर्न सक्छ? मूलतः, सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा कुनै हिउँ पर्दैन। यद्यपि, यो सेप्टेम्बरमा हिउँ पर्न सक्छ डाईजेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूको शीर्षमा। के सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलेका छन्? सेप्टेम्बरमा पनि, होक्काइडोमा राम्रा फूलहरू फूलेका छन्। यद्यपि, लैभेंडर फूलहरू फूलेको छैन। सेप्टेम्बरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? सेप्टेम्बरमा, बिहान र साँझ एकदम राम्रो छ। सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? शरद लुगाहरू सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा योग्य छन्। जापानमा खस्ने लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। भ्रमण गर्ने उत्तम समय कहिले हो ...
2020 /6/ 11
अक्टुबरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म अक्टोबरमा होक्काइडोको मौसम वर्णन गर्दछु। यस अवधिमा होक्काइडो शरद inतुमा छ। अक्टुबरको मध्यदेखि सप्पोरो जस्ता शहरहरूमा शरद पातहरू सुन्दर छन्। जे होस्, यो बिहान र बेलुका चिसो छ, त्यसैले कृपया तपाइँको जाडोका लुगालाई सूटकेसमा राख्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। अक्टूबरमा टोकियो र ओसाकाको मौसममा लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अक्टूबरमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर अक्टूबरमा होक्काइडोको मौसम (अवलोकन) अक्टूबरको शुरुमा होक्काइडो मौसम अक्टूबरको मध्यमा होक्काइदो मौसम अक्टूबरको अन्तमा होक्काइदो मौसम क्यू र अक्टूबरमा होक्काइडोको बारेमा अक्टोबरमा हिउँ पर्दछ? हिउँ डाइसेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछ। सप्पोरो जस्ता मैदानहरूमा पनि, कहिलेकाहीं अक्टुबरको अन्तमा पहिलो हिउँ पर्दा यस्तो अवसरहरू हुन्छन्। यद्यपि अक्टुबर मूलतः मैदानी मैदानमा शरद seasonतु हो। के अक्टोबरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्? फूल फुल्ने मौसम बितिसकेको छ, तर अक्टोबरको बीचमा तपाईं केही फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं दूरीमा हिउँ पर्ने पहाडहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अक्टूबरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? होक्काइडो अक्टोबरमा छोटो गिरावट हो। यद्यपि अक्टोबरको पछिल्लो बिहान र बेलुका तापक्रम around डिग्री सेल्सियसमा झर्नेछ र लामो जाडो नजिक आउँदैछ। अक्टुबरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? ...
नोभेम्बरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म नोभेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा परिचय दिनेछु। अक्टोबरमा सुन्दर शरद leavesतुका पातहरू देख्न सकिन्छ, तर पातहरू नोभेम्बरमा पातलो रूखहरूबाट खस्छन्। पूर्ण विकसित जाडो आउनेछ। तपाईंले होक्काइडोको लागि प्रस्थान गर्नु भन्दा पहिले कृपया पर्याप्त जाडोको कपडा तयार गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। नोभेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा नोभेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर तालिका नोभेम्बरमा होक्काइडो मौसम नोभेम्बरको मध्यमा होक्काइदो मौसम नोभेम्बरको मध्यमा होक्काइदो मौसम नोभेम्बरको अन्तमा होक्काइदो मौसम Q र A नोभेम्बरमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? होक्काइडोमा कहिलेकाहीँ नोभेम्बरदेखि हिउँ पर्न थाल्छ। यद्यपि हिउँ अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन र पग्लनेछ। नोभेम्बरको अन्ततिर क्षेत्र मा निर्भर गर्दै हिउँ बिस्तारै जम्मा हुनेछ। नोभेम्बरमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोमा, जाडो नोभेम्बरमा शुरू हुन्छ। यो अझै दिउँसोमा १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ, तर बिहान र साँझ जमिनमुनि रहनेछ। नोभेम्बरमा होक्काइडो डिसेम्बरमा टोकियो भन्दा चिसो छ। नोभेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? तपाईंलाई नोभेम्बरमा अदालत चाहिन्छ। प्यान्ट अन्तर्गत टाईट लगाउन अझ राम्रो हुन सक्छ विशेष गरी नोभेम्बरको अन्तमा। यो कहिलेकाँहि नोभेम्बरको अन्तमा हिउँसँग चिप्लन्छ। म एडीको सट्टा बुट लगाउने सल्लाह दिन्छु। कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस् ...
डिसेम्बर मा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाइँ डिसेम्बर मा होक्काइडो जाने योजना बनाउनु हुन्छ भने, तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कति चिसो छ। त्यसो भए, यस पृष्ठमा म डिसेम्बर महिनाको लागि होक्काइडोको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। होक्काइडो टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै चिसो छ। जापानको पश्चिम तर्फ, हिउँ अक्सर आउँछ त्यसैले कृपया तपाईंको कोट र अन्य न्यानो सामानहरू नभुल्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। कृपया तपाइँलाई जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्नुहोस्। तल डिसेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। डिसेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा सामग्री प्रश्न र उत्तर डिसेम्बरमा होक्काइडोको डिसेम्बरमा (अवलोकन) होक्काइडो डिसेम्बरको शुरुमा मौसम होक्काइदो मौसम डिसेम्बरको मध्यमा होक्काइदो मौसम डिसेम्बरको अन्तमा होक्काइदो मौसम Q & A डिसेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा डिसेम्बरमा हिमपात हुन्छ? यो डिसेम्बर मा अक्सर Hokkaido मा सुन्न। हिउँलाई निसेको जस्ता स्की क्षेत्रमा थुप्रिएको छ। यद्यपि, सप्पोरो जस्ता शहरहरूमा, यो डिसेम्बरको मध्यदेखि नै हिउँ पर्न थाल्छ। डिसेम्बरमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडो डिसेम्बरमा धेरै चिसो छ। अधिकतम दिनको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ, विशेष गरी मध्य डिसेम्बर पछि। डिसेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? डिसेम्बरमा, तपाईंलाई पर्याप्त जाडो सुरक्षा चाहिन्छ। जाडोमा होक्काइडोमा लगाउनको लागि कपडाहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने ...
तल सेप्टेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
टोक्यो मौसम सेप्टेम्बरमा! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा टोकियो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सेप्टेम्बरमा टोकियोमा मौसम जानकारीको बारेमा चिन्तित हुनुहुनेछ। सेप्टेम्बरमा तापक्रम थोरै कम हुन्छ, जुन यात्रा गर्न सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि सेप्टेम्बरमा टोकियोमा पनि आँधीले आक्रमण गर्न सक्छ। यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा टोकियोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल सेप्टेम्बरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मी र शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) सेप्टेम्बर (२०१)) को बीचमा टोकियो मौसम सेप्टेम्बरको बीचमा (२०१ Tok) टोकियो मौसम सेप्टेम्बरको अन्तमा (२०१)) सेप्टेम्बरमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन सेप्टेम्बरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 2018 2018१-२०१०) सेप्टेम्बरको शुरुमा, टोकियोमा तापमान अगस्टको तुलनामा थोरै कम हुनेछ, तर यो अझै थोरै तातो छ। किनकि दिनको तापक्रम degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ, कृपया तातो बारे सावधान रहनुहोस्। यो सेप्टेम्बरको बीचमा शीतल हुनेछ, र हामी शरद feelतु आएको छ लाग्छ। सेप्टेम्बरको अन्तमा, हामी प्राय जसो आरामसँग खर्च गर्न सक्षम हुनेछौं। यद्यपि यो समयदेखि पानी परेको रूपमा ...
ओसाका सेप्टेम्बरमा मौसम! तापमान र वर्षा
ओसाका सेप्टेम्बरमा शीतल हुनेछ। तपाईं खुशीका साथ पर्यटन स्थलको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तर, सेप्टेम्बरमा वर्षाका दिनहरू बढ्ने छन्। एक जोखिम छ कि एक टाइफुन आउँछ, त्यसैले भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसममा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। सेप्टेम्बरमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) सेप्टेम्बर (२०१ early) को बीचमा ओसाका मौसम सेप्टेम्बरको बीचमा (२०१)) ओसाका मौसम सेप्टेम्बरको बीचमा (२०१)) ओसाकाको सेप्टेम्बरमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन सेप्टेम्बरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। सेप्टेम्बरमा, तातो गर्मी समाप्त भएको छ र चिसो दिन बिस्तार बिस्तार बढ्दैछ। सेप्टेम्बरको शुरुमा, त्यहाँ दिनहरू हुन्छन् जब अधिकतम तापक्रम 2018 30 डिग्री हुन्छ, तर यो सेप्टेम्बरको मध्यमा शीतल हुनेछ। सेप्टेम्बरको अन्तमा यो शीतल हुनेछ र धेरै मानिसहरूले लामो बाहुला शर्ट लगाउनेछन्। म पहिले ओसाकामा बस्थेको छु। यो अगस्टमा धेरै तातो भएको थियो, त्यसैले मैले गरे ...
प्रश्न र सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा
सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा मौसम (अवलोकन)
सेप्टेम्बरको सुरूमा होक्काइडो मौसम
सेप्टेम्बरको मध्यमा होक्काइडो मौसम
सेप्टेम्बरको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ?
मूलतः, सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा कुनै हिउँ पर्दैन। यद्यपि, यो सेप्टेम्बरमा हिउँ पर्न सक्छ डाईजेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूको शीर्षमा।
के सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलेका छन्?
सेप्टेम्बरमा पनि, होक्काइडोमा राम्रा फूलहरू फूलेका छन्। यद्यपि, लैभेंडर फूलहरू फूलेको छैन।
सेप्टेम्बरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ?
सेप्टेम्बरमा, बिहान र साँझ एकदम राम्रो छ।
सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
शरद लुगाहरू सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा योग्य छन्। जापानमा खस्ने लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान मा शरद पोशाक! जापानमा शरद duringतुमा तपाईले के लगाउनु पर्छ?
यदि तपाई शरद Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नु पर्छ? यदि यो शरद isतु हो भने, यो सेप्टेम्बर, अक्टुबर वा नोभेम्बरमा भर पर्दै वस्त्रहरू फरक फरक हुन्छन्। यस पृष्ठमा, म जापानी को शरद clothesतु कपडा ठोस फोटो संग परिचय गर्दछु। कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् ...
होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो?
यदि तपाइँ जाडो हिउँको दृश्यबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम मौसमहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूल फाँटहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने जुलाई र अगस्त उत्तम हुन्।
सेप्टेम्बर मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: सेप्टेम्बर मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
The जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०)
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, सेप्टेम्बरमा तापक्रम बिस्तारै होक्काइडोमा खस्छ। यो सेप्टेम्बरको अन्तमा धेरै चिसो हुनेछ।
होक्काइडोमा पनि, उच्च दिनको तापक्रम सेप्टेम्बरमा 30० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी कहिल्यै हुँदैन। यद्यपि प्रमुख पर्यटन क्षेत्र अझै पनी सुन्दर ग्रीष्म दृश्यहरू छन्। फुरानो र अन्य दर्शनीय स्थलहरूमा, सुन्दर फूलहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि तपाइँ रमाईलो यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
जे होस्, कृपया याद गर्नुहोस् कि सेप्टेम्बरमा आँधी वा शीतोष्ण चक्रवातले आक्रमण गर्न सक्छ। जब भारी वर्षा वा बतास चल्यो, हवाइजहाज र रेलहरू बन्द हुन्छन्। यस्तो समस्यामा नफर्कनको लागि कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमान नेट वा टिभीबाट पाउनुहोस्। कृपया आफूसँग छाता ल्याउनुहोस्।
होक्काइडोमा, दिनको तापक्रमको भिन्नता वर्षभरि तीव्र हुन्छ। यो सेप्टेम्बरमा बिहान र बेलुका धेरै चिसो हुनेछ। दिनको न्यूनतम तापमान १० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुन सक्छ। यो धेरै चिसो छ, त्यसैले जम्पर जस्तो लुगा तयार गरौं।
यदि तपाईं डाईजेट्सुजान जस्ता उच्च पहाडहरूमा भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, जाडोका लुगाहरू आवश्यक छन्। डेसेत्सुसानमा, जाडो महिनाको मध्य सेप्टेम्बरमा शिखरमा आउँछ। सेप्टेम्बरको अन्तमा हिउँ पहाडको चुचुरोमा घुडाईको उचाईमा जमाउन सकिन्छ।
जापान मेटेरोलोजिकल एजेन्सी द्वारा सेप्टेम्बरमा जारी गरिएको होक्काइडोको मौसम तथ्यांक तल छ। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
होक्काइडो को नक्शा
होक्काइडोमा मौसम डेटा (प्रारम्भिक सेप्टेम्बर)
(कुल हिमपात गहराई)
साप्पोरो २.24.3..16.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.49.5..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.23.7..16.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.44.8..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.23.8..13.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.52.1..XNUMX मिमी (-)
Biei २.23.0..11.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.45.8..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.23.8..XNUMX डिग्री (℃) २.13.3..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.21.3..15.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.3..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.21.8..14.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.8..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.21.3..13.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.43.2..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.20.0..14.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.47.7..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.20.9..14.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.54.6..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.23.2..14.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.50.2..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.24.3..16.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.60.8..XNUMX मिमी (-)
※ सबै तथ्या्कहरू जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले घोषणा गरेको १ 30 1981१ -२०१० को 2010० बर्षको औसत हो
Hokkaido यस समयमा फोटोहरुमा देखियो
१० सेप्टेम्बर २०१ - - ओडोरी पार्क, सप्पोरो, होक्काइडो, जापानमा टेलिभिजन टावर = शटरस्टक
मौसम र सूर्योदय / सूर्यास्त समय
यो अगस्तको भन्दा सेप्टेम्बरको शुरुवातमा ठण्डा हुनेछ। दिनको समयमा पनि, यो तुलनात्मक रूपमा सहज छ।
माथिको तस्वीर ओप्पोरी पार्कमा लिइएको थियो, सप्पोरोको केन्द्र। तपाईमको तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ, सेप्टेम्बरको सुरूमा आकाश एकदम नीलो र उच्च हुनेछ। यो शरद skyतु हो।
सेप्टेम्बरको शुरुमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5:०२ र सूर्यास्त समय १ 02:०18 को आसपास हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करिब 4:११ र सूर्यास्त समय १ 45::17 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (सेप्टेम्बरको मध्य)
साप्पोरो २.22.5..14.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.43.2..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.22.0..14.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.9..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.21.7..11.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.0..XNUMX मिमी (-)
Biei २.20.9..9.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.37.7..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.21.6..10.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.9..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.19.9..14.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.1..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.20.3..13.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.43.9..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.19.6..11.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.48.4..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.18.9..13.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.68.6..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.19.8..12.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.53.5..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.21.6..12.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.48.0..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.22.8..14.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.8..XNUMX मिमी (-)
सेप्टेम्बर १:: ओटारु, होक्काइडो, जापानमा ओटारु संगीत बक्स संग्रहालयको दृश्य = शटरस्टक
सेप्टेम्बरको मध्यमा सप्पोरो जस्ता प्रमुख शहरहरूमा पनि बिहान र साँझको न्यूनतम तापमान १० डिग्री सेल्सियसमा झर्नेछ। दिनको समयमा तपाईं पसिना र तातो हुन सक्नुहुन्छ, तर यो साँझ पछि चिसो हुनेछ, त्यसैले एक लामो आस्तीन कोट ल्याउनुहोस्।
सेप्टेम्बरको मध्यमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5:१:13 हो र सूर्यास्त समय १ 17::46 हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करिब 4:११ र सूर्यास्त समय १ 56::17 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (सेप्टेम्बर ढिलो)
साप्पोरो २.20.4..11.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.5..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.19.9..11.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.41.9..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.19.3..8.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.9..XNUMX मिमी (-)
Biei २.18.5..6.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.8..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.19.3..7.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.2..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.17.9..12.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.46.1..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.18.6..10.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.29.6..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.17.8..9.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.37.3..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.17.6..11.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.50.7..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.18.3..10.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.47.5..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.19.7..9.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.9..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.21.0..11.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.48.9..XNUMX मिमी (-)
सेप्टेम्बर २ 26 २०१ 2016: यसुसान गन्डोला र रोपवे, होक्काइडो, जापानको एक झ्यालबाट पनोरैमिक दृश्य = शटरस्टक
होक्काइडो सेप्टेम्बरको अन्तमा शरद .तु हो। दिन को समयमा, तपाइँ आरामदायी हुनेछ। र बिहान र बेलुका यो एकदम चिसो छ, त्यसैले ठोस शरद clothesतुको लुगा लगाउन उत्तम हुन्छ।
डाईसेट्सुजानको चुचुरोमा हिउँ पर्दछ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं असाहिकावा र बीइई जस्ता मैदानबाट हिउँले ढाकिएका पहाडहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
सेप्टेम्बरको अन्तमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय 5:२:24 वरपर छ र सूर्यास्त समय १ 17:२:28 तिर छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5::07। र सूर्यास्त समय १ 17:०11 को बारेमा छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले सेप्टेम्बरको शुरुवातको लागि 2019th तारिखमा समय पोस्ट गर्‍यो, सेप्टेम्बरको बीचमा १th औं समय र सेप्टेम्बरको लागि २th औँ समय।
म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु।
होक्काइडोका लागि, कृपया निम्न लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई मनपर्दछ।
>> होक्काइडो! २१ लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र र १० एयरपोर्टहरू
>> नयाँ Chitose एयरपोर्ट! सप्पोरो, निसेको, फुरानो आदिमा पहुँच।
"सेप्टेम्बर" मा फिर्ता
बोन कुरोसा मैले लामो समय सम्म निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् यस लेखमा थप विवरणहरू लागि।
मार्चमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
टोक्यो फेब्रुअरी मा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यात्राको योजना बनाउनुहोस्
सबै एक यात्रा को योजना कहिले जाने (१)) घटना क्यालेन्डर (१)) मौसम र मौसम () 65) सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम ()०) आवास ()) टिकट र यात्रा (२) ट्रान्सपोर्ट (११) लुगा ()) भाषा (१) मुद्रा (१) समय भिन्नता (१) इन्टर्नेट (१२) निकासी ()) () 83) सिक्नुहोस् जीवन र संस्कृति ()१) ईतिहास ()) सम्बन्धित साइटहरू ())
सबै क्षेत्रहरु होक्काइडो ()२) हुनशु: तोहोकु () 47) अओमोरी प्रान्त ()) अकिता प्रान्त (११) इवाटे प्रान्त ()) मियागी प्रान्त ()) यामगाता प्रान्त ()) फुकुशिमा प्रान्त ()) हुनशु: कन्तो ()१) टोकियो ()१) टोकियो महानगर ()) कानगावा प्रान्त ()) चिबा प्रान्त ()) सैतामा प्रान्त ()) Ibaraki प्रान्त ()) गुन्मा प्रान्त ()) तोचिगी प्रिफेक्चर ()) हुनशु: चुबु () 66) Shizuoka प्रान्त ()) यामानशी प्रान्त (११) नागानो प्रान्त (१ 15) निगाता प्रान्त ()) टोयामा प्रान्त ()) ईशिकावा प्रान्त ()) फुकुई प्रान्त ()) Gifu प्रान्त (१)) आईची प्रान्त ()) माई प्रान्त ()) हुनशु: कन्साई () 78) शिगा प्रान्त ()) क्योटो () 33) क्योटो प्रान्त (२) नारा प्रान्त ()) वाकायामा प्रान्त ()) ओसाका ()) ओसाका प्रान्त ()) ह्योगो प्रिफेक्चर ()) हुनशु: चुगोकु () 33) ओकायामा प्रान्त ()) हिरोशिमा प्रान्त (११) यामागुची प्रिफेक्चर (२) टोटोरी प्रिफेक्चर ()) Shimane प्रान्त ()) शिकोकू (१ 17) टोकुशिमा प्रिफेक्चर ()) कागवा प्रान्त ()) Ehime प्रान्त ()) कोची प्रिफेक्चर (१) क्युशु () 37) फुकुओका प्रान्त ()) सागा प्रान्त (१) नागासाकी प्रान्त ()) कुमामोटो प्रिफेक्चर ()) ओइटा प्रान्त ()) मियाजाकी प्रिफेक्चर ()) कागोशिमा प्रान्त ()) ओकिनावा प्रान्त (१))
सबै रुचिहरू टिकट र यात्रा (२) फेसन ()) किनमेल (२)) जापानी खाना (१ 15) हिम गन्तव्य () 77) चेरी फूलहरू () 34) फूलहरू ()२) जापानी बगैचा (१)) शरद पातहरू () 54) ओन्सेन (२२) जनावर र माछा (१०) पैदल यात्रा () 67) दर्शनीय सवारी (२)) मनोरंजन पार्क ()) रात दृश्य र प्रकाश ())) चाडपर्व (२)) मन्दिर र तीर्थहरू ()१) महल () 33) ऐतिहासिक साइटहरू ())) समुराई र निन्जा (१ 14) परम्परागत शिल्प ()) संग्रहालय ()) मंगा र एनिमे ()) समुद्र तट (११) खेल (१)) उद्योग र वाणिज्य ()) यातायात (१२)
सबै ऋतु जाडो ()२) डिसेम्बर (१)) जनवरी (१)) फेब्रुअरी (१)) वसन्त () 47) मार्च (१२) अप्रिल (१)) मे (१)) गर्मी () 37) जुन (१२) जुलाई (१)) अगस्ट (१ 15) शरद () 47) सेप्टेम्बर (१)) अक्टुबर (१)) नोभेम्बर (१))
सबै टैग अबाशिरी (१) निक्को (१) Ise तीर्थ (१) शिरेटोको (१ 14) डायसेट्सुआन ()) असाहिमा चिड़ियाघर (१) फुरानो (१ 17) Biei (19) सप्पोरो (२२) ओटारु (१ 14) निसेको ()) हाकोडाटे (१)) अओमोरी ()) Oirase धारा ()) चुसनजी मन्दिर ()) काकुनुडेट ()) सेंडाई ()) जिन्जान ओन्सेन ()) जाओ ()) आइजु-वाकामात्सु (२) निक्को तोसो-गु ()) हिटाची समुद्री किनार पार्क ()) आशिकागा फ्लावर पार्क ()) ओज ()) टोक्यो डिज्नी (१) टोक्यो स्काइट्री ()) ईडो-टोक्यो संग्रहालय (२) Asakusa ()) सेन्सोजी मन्दिर ()) Ueno (१) टोक्यो राष्ट्रिय संग्रहालय (२) अकिहाबारा ()) इम्पीरियल प्यालेस (२) जिन्जा ()) Odaiba (२) टोकियो टावर ()) शिबुया (२) मेजी-जिंगु तीर्थ ()) शिन्जुकु ()) Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान (२) माउन्ट टाकाओ ()) योकोहामा (२) कामकुरा ()) हसेदेरा मन्दिर (१) एनोशिमा ()) Hakone ()) Hakone खुला एयर संग्रहालय (१) माउन्ट फुजी (१ 13) फुजी-क्यू हाइलैंड (२) ताल कावागुचिको (२) जिगोोकुदानी हिउँ बाँदर पार्क ()) मत्सुमोटो क्यासल ()) हाकुबा ()) कामिकोची ()) तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्ग ()) टाकायामा ()) शिराकावागो ()) कनाजावा ()) केन्रोकुएन गार्डन ()) नाबाना नो सातो ()) Ise भव्य मन्दिर (२) जिओन (१) किंकाकुजी मन्दिर ()) कियोमिजुदेरा मन्दिर ()) फुशिमी इनारी-ताइशा तीर्थ (4) Eikando Zenrinji मन्दिर ()) अरशीयामा ()) तोडाइजी मन्दिर ()) नारा पार्क ()) माउन्ट योशिनो ()) कोयासन ()) कुमानो कोडो ()) उम्मेद (१) ओसाका कासल ()) डोटनबोरी (१) USJ (3) Kaiyukan (१) कोबे ()) हिमेजी महल ()) हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम ()) मियाजीमा (१०) इजुमो ताइशा ()) फुकुओका ()) हुइस टेन बॉश (१) नागासाकी ()) कुमामोटो क्यासल (२) एसो ()) बेप्पू ()) युफुइन ()) Takachiho घाटी ()) सकुराजिमा टापु (२) याकुशिमा (२) ओकिनावा ())
चयन पछि "सबमिट" क्लिक गर्नुहोस्
"फोटो" मा जानुहोस्
सिफारिस गरिएका लेखहरू
जापानमा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गन्तव्यहरू! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद
यस साइटमा, मसँग जापानको बिभिन्न ठाउँहरूमा व्यक्तिगत रुपमा परिचय गराउन पृष्ठहरू छन्। तपाईं पृष्ठहरूमा जान सक्नुहुन्छ मेनू हेरेर र तपाईंलाई रूचि भएको शीर्षकहरूमा क्लिक गरेर। तथापि, मैले यी पृष्ठहरू तल सूचीबद्ध गरें। निम्नलाई हेर्नुहोस् र यदि तपाईंको पृष्ठ छ भने ...
क्योटो! २ Best उत्तम आकर्षणहरू: फुशिमी इनारी, कियोमिजुडेरा, किंकाकुजी आदि।
क्योटो एक सुन्दर शहर हो जुन परम्परागत जापानी संस्कृतिको उत्तराधिकारी हो। यदि तपाईं क्योटोमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जापानी परम्परागत संस्कृति तपाईंको मनको सामग्रीमा मजा लिन सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म पर्यटकीय आकर्षणहरूको परिचय दिनेछु जुन क्योटोमा विशेष गरी सिफारिस गरिएको छ। यो पृष्ठ लामो छ, तर यदि तपाईं यो पृष्ठ पढ्नुभयो भने ...
Hokkaido! २१ लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र र १० एयरपोर्टहरू
होक्काइडो होन्शु पछि जापानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो टापु हो। र यो उत्तरी र सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो। होक्काइडो जापानका अन्य टापुहरू भन्दा चिसो छ। किनकि जापानीले गरेको विकासमा ढिलाइ भएको छ, होक्काइडोमा विशाल र सुन्दर प्रकृति छ। यस पृष्ठमा, म यसको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछु ...
टोकियोमा गर्नु पर्ने उत्तम कुराहरु: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney आदि।
टोकियो जापानको राजधानी हो। जबकि परम्परागत संस्कृति अझै बाँकी छ, समकालीन नवीनता निरन्तर भइरहेको छ। कृपया आउनुहोस् र टोकियो भ्रमण गर्नुहोस् र ऊर्जा महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म पर्यटन क्षेत्रहरू र टोकियोमा विशेष गरी लोकप्रिय दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। यो पृष्ठ धेरै लामो छ। यदि तपाईं यो पृष्ठ पढ्नुहुन्छ भने, ...
माउन्ट फुजी: जापानमा १ best उत्तम दृश्य ठाउँहरू!
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई माउन्ट हेर्न सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण देखाउनेछु। फुजी माउन्ट फूजी जापानको सब भन्दा अग्लो पहाड हो जुन 3776 XNUMX मिटरको उचाईको साथ छ। त्यहाँ माउन्टको ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाईएको तालहरू छन्। फुजी, र यसको वरिपरि एउटा सुन्दर परिदृश्य सिर्जना गर्दै। यदि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने ...
जापानमा १२ सर्वश्रेष्ठ हिमस्थानहरू: शिराकावागो, जिगोकोदानी, निसेको, सप्पोरो हिम उत्सव ...
यस पृष्ठमा, म जापानको अद्भुत हिउँ दृश्यको बारेमा परिचय दिन चाहन्छु। जापानमा धेरै हिउँका क्षेत्रहरू छन्, त्यसैले उत्तम हिम स्थानहरू निर्णय गर्न गाह्रो छ। यस पृष्ठमा मैले उत्तम क्षेत्रहरू छोटकरीमा लेखें जुन मुख्यतया विदेशी पर्यटकहरू माझ लोकप्रिय छन्। म यसलाई साझा गर्नेछु ...
जापानमा सर्वश्रेष्ठ चेरी खिलने ठाउँ र सीजन! हिरोसाकी कासल, माउंट योशिनो ...
यस पृष्ठमा, म सुन्दर चेरी फूलहरूको साथ दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। किनकि जापानी मानिसहरु यहाँ र त्यहाँ चेरी फूलहरु रोप्न, यो उत्तम क्षेत्र निर्णय गर्न धेरै गाह्रो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई ती क्षेत्रहरूमा परिचय दिनेछु जहाँ विदेशबाट आएका यात्रीहरूले चेरी फूलहरू सहित जापानी भावनाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्। ...
जापानी ओन्सेनले विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूको लागि सिफारिस गरे
जापान धेरै ज्वालामुखीहरु भएको देश भएकोले, ज्वालामुखीको म्याग्माले भूगर्भीय पानी तताएको छ, ओन्सेन (तातो स्प्रि )्ग्स) यहाँ र त्यहाँ बाहिर स्प्रि .्ग गर्दछ। हाल, भनिन्छ जापानमा 3000००० भन्दा बढी स्पा क्षेत्रहरू छन्। ती मध्ये धेरै ठाउँहरू विदेशी पर्यटकहरू माझ लोकप्रिय छन्। खुल्ला ...
१२ जापानमा सर्वश्रेष्ठ मन्दिर र तीर्थहरू! फुशिमी इनारी, कियोमिजुडेरा, तोडाइजी, आदि।
जापानमा धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। यदि तपाईं ती स्थानहरूमा जानुहुन्छ भने, तपाईं पक्कै शान्त र स्फूर्ति महसुस गर्नुहुनेछ। त्यहाँ सुन्दर मन्दिर र मन्दिरहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्न चाहानुहुन्छ। यस पृष्ठमा, मलाई केहि सबैभन्दा लोकप्रिय मन्दिरहरू र मन्दिरहरूको परिचय दिनुहोस् ...
जापानको मौसम! चार asonsतुहरु को परिवर्तन मा संस्कृति पोषित
जापान मा एक स्पष्ट मौसमी परिवर्तन छ। गर्मी धेरै तातो छ, तर तातो सधैंको लागि रहँदैन। तापक्रम बिस्तारै खस्छ र रूखका पातहरू रातो र पहेंलो हुन्छन्। अन्ततः, कडा जाडो पछ्याउनेछ। मान्छे चिसो प्रतिरोध र न्यानो वसन्त आउन को लागी प्रतीक्षा। यो ...
प्रतिलिपि अधिकार © Best of Japan , २०२० सबै अधिकार सुरक्षित।